Soo dejisan Subtitle Edit 3.5.11 – Vessoft
WindowsMultimediaTifaftirayaasha warbaahintaSubtitle Edit
Bogga rasmiga ah: Subtitle Edit
Subtitle Edit – software oo leh sifooyin xirfadeed oo xirfad leh si loo abuuro, loo hagaajiyo loona xoojiyo subtitles. Software wuxuu taageersan yahay noocyo badan oo subtitles ah waxayna u oggolaaneysaa inay u rogaan qaabka loo baahan yahay. Subtitle Edit waxay la socotaa muuqaal sawir oo qabow oo soo bandhigi kara sawirrada iyo qaabka daloolka. Barnaamijkani wuxuu leeyahay hawlaha waxtarka leh ee isku midka ah ee isku darka ama kala-soocida kala-jajabinta, ka-soo-rogista subtitles-ka DVD, hubinta jumlada adoo isticmaalaya qaamuusyo kala duwan, isbarbardhig hoosaadyo, hagaajinta wakhtiga bandhigga, iwm Subtitle Edit ayaa furi kara subtitles oo ku dhex jira Matroska, MP4, AVI iyo warbaahinta kale qaababka. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si toos ah ugu turjumeyso subtitles luqado kala duwan adigoo isticmaalaya Google Translate. Subtitle Edit sidoo kale waxaa ku jira moduleka si loo xaliyo khaladaad hoosaadka caadiga, kaas oo soo bandhigay liiska ficilada lagu saxayo qaladaadka waxayna kuu ogolaaneysaa inaad dooratid habka loo dalbado.
Wuxuu taageeraa noocyada kala duwan ee subtitles
Abuuraa oo isku dhejiyaa khadadka subtitle
Wuxuu furaa subtitles oo ku dhex jira noocyo warbaahineed oo kala duwan
Sifee khaladaadka caadiga ah
Raadinta iyo beddelaad badan
Waxay tirtiraysaa qoraalka dadka dhagaha daciifka ah
English, Українська, Español (España), Deutsch...
Soo dejisan Subtitle Edit
Faallo ku saabsan Subtitle Edit
Subtitle Edit Xirfadaha la xiriira
Dashlane – maareeye sirta ah si uu u keydiyo macluumaadka sirta ah ee isticmaaleha isla markaana wuxuu si otomaatig ah ugu buuxiyo foomka websaydhka macluumaadka shakhsiga ah.